चाइना गन क्लिनिङ किट निर्माता र आपूर्तिकर्ता - रोची
घर > उत्पादनहरू > बन्दुक सफाई > बन्दुक सफाई किट
चीनमा निर्मित गन क्लिनिङ किट रोचीबाट सस्तो मूल्यमा किन्न सकिन्छ। यो एक पेशेवर उच्च गुणस्तर उत्पादन निर्माता र चीन मा कारखाना हो। हामी एक चीन कम्पनी हो जसले अनुकूलित उत्पादन सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यदि तपाइँ Pricelist र उद्धरण चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ हामीलाई सन्देश छोडेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई सकेसम्म चाँडो फिर्ता आउनेछौं।
तेलको बोतलको साथ कम्प्याक्ट गन क्लिनिङ किट
तेलको बोतलको साथ कम्प्याक्ट गन क्लिनिङ किट — कम्प्याक्ट बलियो भण्डारण केस। खोल्न र बन्द गर्न सजिलो। - आरामदायी र टिकाउ, अलग गर्न मिल्ने एल्युमिनियम बन्दूक सफाई किट ह्यान्डल; - भारी शुल्क र प्रभावकारी बन्दूक सफाई ब्रश एमओपी ब्रास टिप सर्पिल स्प्रिंग ब्रश; - ह्याङ र सुविधाजनक वितरण डिजाइन ब्लिस्टर घुसाउनुहोस्। शटगन सफाईको लागि ग्राहकको पहिलो रोजाइ।
कम्प्याक्ट गन क्लिनिङ किट
कम्प्याक्ट गन क्लिनिङ किट - कम्प्याक्ट बलियो भण्डारण केस। खोल्न र बन्द गर्न सजिलो। - आरामदायी र टिकाउ, अलग गर्न मिल्ने एल्युमिनियम बन्दूक सफाई किट ह्यान्डल; - भारी शुल्क र प्रभावकारी बन्दूक सफाई ब्रश एमओपी ब्रास टिप सर्पिल स्प्रिंग ब्रश; - ह्याङ र सुविधाजनक वितरण डिजाइन ब्लिस्टर घुसाउनुहोस्। शटगन सफाईको लागि ग्राहकको पहिलो रोजाइ।
कम्प्याक्ट युनिभर्सल गन क्लिनिङ किट तेलको बोतलको साथ
कम्प्याक्ट युनिभर्सल गन क्लिनिङ किट विथ तेलको बोतल — कम्प्याक्ट बलियो भण्डारण केस। खोल्न र बन्द गर्न सजिलो। - आरामदायी र टिकाउ, अलग गर्न मिल्ने एल्युमिनियम बन्दूक सफाई किट ह्यान्डल; - भारी शुल्क र प्रभावकारी बन्दूक सफाई ब्रश एमओपी ब्रास टिप सर्पिल स्प्रिंग ब्रश; - ह्याङ र सुविधाजनक वितरण डिजाइन ब्लिस्टर घुसाउनुहोस्। बोर सर्प बन्दुक सफाई डोरी समावेश छ।
कम्प्याक्ट गन क्लिनिङ किटहरू
कम्प्याक्ट बन्दूक सफा गर्ने किटहरूले विभिन्न बन्दुक क्यालिबरहरू भेट्नको लागि तपाईंलाई पूर्ण व्यावसायिक सफाई उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। ब्लिस्टर ट्रेहरूले तिनीहरूलाई नियमित रूपमा सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ।
तातो बिक्री बन्दुक सफाई किट
रोची प्रसिद्ध चाइना गन क्लिनिङ किट निर्माता र आपूर्तिकर्ता मध्ये एक हो। हाम्रो कारखाना हट सेल्स गन क्लिनिङ किटको निर्माणमा माहिर छ।
गोलाकार रनिङ गन क्लिनिङ बोर स्नेक डोरीहरू
सर्कुलर रनिङ गन क्लिनिङ बोर स्नेक रोप्स— कम्प्याक्ट बलियो भण्डारण केस। खोल्न र बन्द गर्न सजिलो। â— आरामदायी र टिकाउ, अलग गर्न मिल्ने एल्युमिनियम बन्दुक सफा गर्ने किट ह्यान्डल; â— भारी शुल्क र प्रभावकारी बन्दूक सफाई ब्रश एमओपी ब्रास टिप सर्पिल वसन्त ब्रश; - ह्याङ र सुविधाजनक वितरण डिजाइन ब्लिस्टर घुसाउनुहोस्। शटगन सफाईको लागि ग्राहकको पहिलो रोजाइ।
बन्दुक सफाई बोर सर्प डोरी
गन क्लिनिङ बोर स्नेक रोप्स— डोरी र सिंथेटिक फाइबर डोरीमा बनेको ब्रासको तार ब्रसले बोरभित्रको खिया र अवशेषलाई छिट्टै र प्रभावकारी रूपमा हटाउन सक्छ।— यो धुने र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने छ।— पीतलको टुप्पोमा छापिएको क्यालिबर नम्बर धेरै छ। स्पष्ट प्रयोगकर्ताहरूले ब्रास टिप्समा रहेको नम्बर पढेर आफूलाई चाहिने सही साइज फेला पार्न सजिलो हुन्छ।—- ह्यान्डी क्ल्यामशेल प्याक तपाईंलाई झोला वा केसमा राख्न सजिलो छ।— OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छ।
बोर केयर गन ब्रसको साथ बोर स्नेक डोरी सफा गर्दै
बोर केयर गन क्लिनिङ बोर स्नेक रोप ब्रसको साथ— २-इन-१ डिजाईन बोर स्नेक डोरी बाहिर ब्रस र प्याच होल्डरको साथ।— पुरानो बोर सर्पले काम गर्नु अघि तेल निकाल्ने भन्दा फरक, अलग गरिएको प्याच लुप र ब्रशको साथ डिजाइन गरिएको किट। , विलायक र बन्दूक तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस् डोरीले तेल निकाल्छ।—- कडा र बलियो सिलाई काम, सफाई कार्यमा राम्रो प्रदर्शन सुनिश्चित गर्नुहोस्। — भारी शुल्क सफाई ब्रशले खिया र अवशेषहरू प्रभावकारी रूपमा हटाउँदछ। तिनीहरूलाई झोला वा केसमा राख्न।
गन क्लीनिङ बोर स्नेक रोप्स मल्टीलेयर संयोजन
गन क्लिनिङ बोर स्नेक रोप्स मल्टिलेयर संयोजन, यो बहु-तह सिलिन्डर विभिन्न क्यालिबरहरूमा धेरै बोर स्नेक गन सफा गर्ने डोरीहरू मिलेर बनेको छ। यो भण्डारण र संग्रह को लागी सुविधाजनक छ। भित्री कोर डोरी घुमाउने कोरको रूपमा मात्र होइन, तर तान्ने ह्यान्डलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो बेलनाकार प्याकेज एकल प्याकेज भन्दा फेला पार्न सजिलो छ। डिजाइन रोची द्वारा पेटेन्ट गरिएको हो।
हरियो प्लास्टिक केस युनिभर्सल गन सफाई किट
हरियो प्लास्टिक केस युनिभर्सल गन क्लिनिङ किट - रडहरू र रडहरू फोर्ज गर्न ठोस पीतल सबै प्रबलित छन्। .17-.270 क्यालिबर राइफलहरूको लागि3ठोस पीतल रडहरू; 30 र माथिको क्यालिबर राइफल, पिस्तौल, शटगन र मजललोडरहरूका लागि3ठोस ब्रास रडहरू।— केसमा प्रत्येक बन्दुकको लागि तपाईंले सफा गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा। तपाईं नयाँ शुरुवात वा पेशेवर शूटर हुनुहुन्न, केस तपाईंको लागि उपयुक्त छ। .â— पोर्टेबल केसले हल्का तौलको टिकाउ प्लास्टिकको केसमा सबै कम्पोनेन्टहरू सफा र व्यवस्थित राख्छ। बोक्ने ह्यान्डलहरूले प्याकेजिङ र बोक्ने सुविधा बढाउँछ।— सफा गर्ने किटमा तपाईंले आफ्नो बन्दुक लिनको लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरणहरू समावेश गर्दछ। सफा गरियो। â— व्यवस्थित र सुरक्षित रहनको लागि कडा केस।
एल्युमिनियम केस युनिभर्सल गन क्लीनिङ किट
एल्युमिनियम केस युनिभर्सल बन्दूक सफाई किटहरू सबै प्रकारका शटगनहरू, राइफलहरू र पिस्तौल सफा गर्नका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईलाई कम्प्याक्ट केसमा सामान्य क्यालिबर बन्दुकहरू सफा गर्न आवश्यक छ। हाम्रो केस टुक्राहरूलाई तिनीहरूको ठाउँमा राख्न डिजाइन गरिएको हो। यो सफाई/रखरखाव किट प्रयोग गरेर आफ्नो बन्दुकहरूलाई तिनीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राख्नुहोस्। सबै कुरा सफा र व्यवस्थित राखिएको छ हल्का तौल टिकाऊ अल्युमिनियम बोक्ने केसमा।
सबै एक डिलक्स एल्युमिनियम केस गन क्लिनिङ किटमा
सबैमा एक डिलक्स एल्युमिनियम केस बन्दुक सफाई किट, बजार मा सबै भन्दा ठूलो बन्दूक सफाई उपकरण हो। तीन 1000mm लामो कार्बन फाइबर रडहरू, सबै तामा ब्रशबाट। 177cal देखि 12g सम्म, कपासमप्स, कपर स्लटेड टिप, चेम्बर क्लिनिङ ब्रस, हुक र अन्य धेरै सामानहरू।
चीनमा बनेको अनुकूलित बन्दुक सफाई किट कम मूल्य वा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। हाम्रा उत्पादनहरू CE प्रमाणित छन्। थप रूपमा, हाम्रा उत्पादनहरू टिकाऊ र सजीलो मर्मत योग्य छन्। Rotchi चीन मा एक प्रसिद्ध बन्दुक सफाई किट निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रा उत्पादनहरू डिजाइनमा फेसन मात्र होइन, उत्कृष्ट र फेन्सी पनि छन्। यसबाहेक, हामीसँग हाम्रा आफ्नै ब्रान्डहरू छन् र हामी बल्क प्याकेजिङलाई पनि समर्थन गर्छौं। यदि मैले अहिले अर्डर गरे भने, के तपाईंसँग स्टकमा छ? अवश्य! यदि आवश्यक छ भने, हामी नि: शुल्क नमूनाहरू मात्र होइन मूल्य सूची र उद्धरणहरू पनि प्रदान गर्नेछौं। यदि म होलसेल गर्न चाहन्छु भने, तपाईले मलाई के मूल्य दिनुहुनेछ? यदि तपाईंको थोक मात्रा ठूलो छ भने, हामी कारखाना मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। नवीनतम बिक्री, नयाँ, उन्नत, छुट र उच्च गुणस्तर बन्दुक सफाई किट किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा आउन तपाईंलाई स्वागत छ। तपाईं हामीबाट छुट उत्पादन किन्न आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं, यदि तपाई थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले हामीलाई अहिले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई समयमै जवाफ दिनेछौं!